देउवाले विश्वासको मत पाएपछि पाकिस्तानले के भन्यो ? — Imandarmedia.com
देउवाले विश्वासको मत पाएपछि पाकिस्तानले के भन्यो ?
काठमाडौँ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएका छन्। सोमबार बिहान ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री खानले संसदबाट विश्वासको मत पाएकोमा समकक्षी देउवालाई बधाई दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री खानले नेपालसँगको हार्दिक सम्बन्धलाई अझ मजबुद् बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै साझा हितका विषयमा नेपालसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने बताएका छन्।
यसअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार राति प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाइसकेपछि टेलिफोन गरेर बधाई दिएका थिए। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत पनि मोदीले देउवालाई बधाई दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उनलाई बधाई र शुभकामना दिएका छन्।
मोदीले फोन गरेर पनि देउवालाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मोदीको त्यही ट्वीट ‘कोट’ गर्दै त्यसमाथि आफ्नो धन्यवाद सन्देश लेखेका छन्।
देउवाले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी, तपाईंको शुभकामना नोटको निम्ति धेरै धन्यवाद। दुई देश र जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन म तपाईंसँग निकट सहकार्यको अपेक्षा राख्छु।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गत असार २९ गते नै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। तर एक साता बित्न आँट्दा पनि भारतीय समकक्षीका तर्फबाट बधाई आएको थिएन। जबकि, २०७१ मा मोदी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएयता उनले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै बधाई दिँदै आएका थिए।
उनले पछिल्लो सात वर्षमा नेपालमा नियुक्त भएका चार प्रधानमन्त्रीलाई त्यही दिन वा अर्को दिन टेलिफोनमा कुरा गरेर बधाई दिने र भारत भ्रमणको निम्तो दिने गरेका थिए भने सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि बधाई दिने गरेका थिए।
नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएका बेला र व्यक्तिगत रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिएका बेला पनि नवनियुक्त नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीले तत्कालै बधाई दिने चलन थियो।
यसपालि भने देउवा प्रधामन्त्री भएको छ दिनसम्म बधाई नदिई बसेका मोदीले आइतबार देउवाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको केही बेरमै सामाजिक सञ्जालमार्फत् बधाई र शुभकामना दिएका हुन्।